Qoyskii Cabdirisaaq Cali Cartan oo hadal laga helay | Kobciye24.com
Qoyskii Cabdirisaaq Cali Cartan oo hadal laga helay
Dec 5, 2016 - jawaab
Kadib markii uu dhacay weerarki lagu eedeeyey Cabdirisaaq Cali Cartan ee Jaamacada Ohio, magaalada Columbus todobaadki hore ayaa markii ugu horeeysay todobad kadib hadal laga helay qoyska Cartan,waxaana hadlay qareenka Qoyska.
Qareenka ayaa warbaahinta u sheegay in qoyska Cartan ay dareemayan walaac ku adan dhacdadii Ohio.
Qoyska Cartan ayaa la sheegay in ay ka baxeen Soomaaliya,ayna tageen Pakistan kadibna ay gaaren Dalka Mareykanka mudo labo sano ah ayay ku sugan yihiin wadankaasi iyagoo wali aanan helin wax sharci ah.
Qoyska Cabdirisaaq ayaa ka dalbaday Dowladda Mareykanka inay si qoto dheer ay u baaraan dhacdadaasi oo ay sheegayan in wiilkoodi kaliya ku luglahayn ayna jiraan masxkax ka weyn.
Booliska ayaa dibada uga soo saaray Qoyska Cabdirisaaq dhacdada markii ay dhacday,Qareenka Qoyska ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin la shaqeynta laamaha amaanka ee wali ku howlan baaritaanka.
Qoyska wiilka Soomaaliga ah ayaa walaac waxaa ku abuuray hadalkii uu soo dhigay bartisa Twitterka Madaxweynaha lasoo doortay ee Mareykanka Donald Trump waxana sidoo kale ay caruurteeda ay kala baqeen aargudasho iyagoo jaamacadaha iyo iskulaadka ka reebay
Dhacdadii Ohia qoyska kaliya walaac ma aysan ku abuurin sidoo kale bulshada ku sugan Ohia ayaa si weyn uga naxday.